Hlola iVenice, Italy - World Tourism Portal
Hlola iVenice, e-Italy
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eVenice, e-Italy.
Yini okufanele uyenze eVenice, Italy - imicimbi.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeVenice
Bukela ividiyo ngeVenice
Hlola iVenice idolobha laseVeneto, isifunda saseNyakatho-East Italy.
Umuzi ucishe ufane njengoba wawunjalo eminyakeni engamakhulu ayisithupha edlule, okungezelela umlingiswa omangazayo. IVenice isebolile selokhu yaqala usuku lwayo futhi izivakashi kakhulu (kukhona abahlali be56000 kanye nezivakashi eziyizigidi ezingama-20 ngonyaka).
Le ndawo ingahle ibonakale ingeyinkulu, kepha ikhona, futhi yakhiwa ngamabibi ahlukile.
Okudume kakhulu yindawo ehlanganisa iziqhingi ze-118 ezifundeni eziphambili ezibizwa nge- “Sestieri”: ICannaregio, uCherello, iDorsoduro, iSan Polo, iSanta Croce neSan Marco, lapho kukhona khona izikhumbuzo ezinkulu nokubona. Ezinye izifunda ezinkulu yi-Isola Della Giudecca neLido di Venezia. Ezinye iziqhingi ezibaluleke kakhulu kuleli chibi zihlanganisa iMurano, iTorcello, iSan Francesco del Deserto neBurano.
Abantu baseVenice bebelokhu basebenza, futhi sebesebenze kakhulu ezimbonini eziningi kumakhulu eminyaka, kubandakanya ezentengiso, ukuphrinta, ubuciko obuhle, ukukhiqiza nokuhlela uhambo lokuya eZweni Elingcwele. Namuhla, ezinye zezimboni ezisele zifaka phakathi: ukwakha umkhumbi, ukuhweba, ukukhiqizwa kwengilazi iMurano nokukhiqizwa kukaleya waseBurano.
Kodwa-ke, ezokuvakasha ziwumkhakha wokuqala, kanti iVenice ingenye yezindawo izivakashi ezivakashelwe kakhulu emhlabeni. Ngokuqondile, ihlela i-29 phakathi kwamadolobha ezokuvakasha emhlabeni futhi ibona izivakashi ezizungeze izigidi ze-20 minyaka yonke. Ukudonswa okuyinhloko ukwakhiwa kwayo okuhle, amaqoqo amaningi obuciko kanye nezimpawu ezibalulekile zomlando. Imisele kanye ne-gondolas yothando, noma kunjalo, mhlawumbe yisizathu esiphambili sezivakashi ze-50,000 ezivakashela iVenice nsuku zonke.
IVenice ihanjiswa yizikhumulo zezindiza ezintathu:
Isikhumulo sezindiza esiseduzane kakhulu iMarco Polo Airport, ezweni elingasogwenyakatho neMestre (ngobuchwepheshe obuyingxenye yedolobha laseVenice kodwa ezweni elikhulu futhi ngaphandle kwesakhiwo esiyingqayizivele seVenice).
Isikhumulo sezindiza iTreviso yi25km (16 mi) sisuka eVenice futhi sincane kodwa siya ngokuya simatasa kakhulu njengokufika okuyindawo enkulu yezindiza zaseRyanair, Wizzair naseTransavia.
Isikhumulo sezindiza iSan Nicolo siyindawo yezindiza ngqo kwiLido. Iphatha izindiza ezincane kuphela, njengoba umgwaqo owujantshi ngotshani futhi ubude bawo buyi-1km. Alinazo izindiza ezihleliwe, kepha zingathakazelisa abashayeli bezindiza abazimele (abafikayo abavela kwizifundazwe zaseScgengen kuphela) ngenxa yokusebenziseka kalula kwedolobha; kungukuhamba okufushane kokwehla kwe-vaporetto.
IVenice, okuwukuphela kwedolobha elihamba ngezinyawo emhlabeni, kalula ukuhamba, futhi ukungabikhona kwezimoto kwenza lokhu kube yinto emnandi ngokukhethekile. Kodwa-ke, ukuhamba nokuma usuku lonke nakho kungakukhathaza, ngakho-ke kungcono ukuzishayela ijubane. Iziqhingi zaseRialtine - ingxenye eyinhloko 'yeVenice - incane ngokwanele ukuhamba ukusuka komunye umkhawulo kuya kolunye cishe ihora, uma nje ungalahleki (okuvamile).
Le ndawo ingumugqa kusuka ekhuphukeni nokwehla kwamabhuloho. Izinto ezinamasondo ngeke ziziqalele ezazo. Umoya, kepha, kungaba yinto ehlukile.
Konke ukuthutha kubandakanya ukuhamba noma izikebhe.
Khumbula ukuthi iningi lamalayini alunaluphi uhlobo lokujikijela nokuthi izixuku zezivakashi zingathuthuka kakhulu ngesinye isikhathi.
Akuwona wonke amisele angabanjiswa ngamatekisi amanzi (uma ungabaza, hlola nabaphathi bakho kusengaphambili).
Ngokuya ngohlobo lokufika nokugaguleka kwamagagasi, kungadingeka ukuthi uxoxisane (phezulu- noma phansi-) umehluko kumazinga aphakathi kokufika nesikebhe se-30cm / 1 unyawo noma ngaphezulu noma ngokungalingani futhi kuvame ukushelela izinyathelo.
Isikebhe sizoba ngabanqikayo, abantu abangajwayele noma labo abanamakhono alinganiselwe bazodinga isandla
Izinduna zesikebhe kufanele zihlale zisezingeni elifanele ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke ngeke zikunikeze isandla semithwalo ngaphandle kwesikejana sabo
Lezi zinsuku, ama-gondolas asetshenziselwa kakhulu izinhloso ezibukekayo esikhundleni sezithuthi zangempela ukusuka ephuzwini A kuya ku-B.
Kukhona izindawo zokuma eziningi ezibekwe ezindaweni ezivame ukuvakasha izivakashi futhi zisobala, ngisho noma i-gondolieri igqoka okuthile okufudumele bese kuba ngotshani abahamba ngezikebhe nezibaya ezimthende.
Ngonyawo impela kuyindlela enhle yokuzwa iVenice.
IVenice ngokwayo akuyona idolobha elikhulu. Izindawo eziningi zedolobha lonke zingafinyelelwa kungakapheli imizuzu eyi-20 yokuhamba, uma uyayazi indlela yakho futhi ungahlala ungacabanganga ngezivakashi.
Ngaphandle kokuthi ucindezelwe isikhathi, qala nje ukuhamba futhi uvumele ulahlekelwe kummango wama-alleys aseVenice. Ngokuhamba kwesikhathi, uzohlala uthola uphawu olujwayelekile noma esitobhini se-vaporetto ukuze uphinde uthole ukuthwala kwakho.
Endleleni uzothola ubuciko obumangalisayo, ukwakhiwa kwezakhiwo ezinhle kakhulu nokubuka okumnandi kwasemadolobheni kanye nemigoqo, amathofi nezindawo zokudlela ukuze ukhulule umkhathi wendawo futhi uphumule izinyawo zakho ezikhathele.
Izindawo ezinkulu, njengePiazza San Marco, Rialto, Ferrovia (esiteshini sesitimela) noma iPiazzale Roma (itheminali yebhasi) ziphawulwe ngemicibisholo ebekwa odongeni.
IVenice bekulokhu (futhi izohlala njalo) ingenye yamadolobha athandana kakhulu emhlabeni, ngakho-ke umsebenzi wothando yinto okumelwe uyenze uma ulapha nesithandwa sakho. Umqondo owodwa odumile ukuhamba ngesikebhe sakusihlwa eVenice njengeGalleon Dinner Cruise eVenice egibele eVenetian Galleon.
IVenice bekulokhu kungumuzi wabathengisi. Ngenxa yalokho, iningi labantu baseVenice abasebenza eVenice basaqhubeka bengabanini noma basebenza esitolo. Uma ukuziqhenya kweRiphabhlikhi yaseVenice kungukuhluka ngokweqile nekhwalithi yezimpahla nezinsizakalo ezingatholakala eVenice, kulezi zinsuku, izivakashi eziningi ziholele ekutheni iVenice igcwale izitolo eziningi ezithengisa izinto eziyisikhumbuzo eziphansi. Izitolo zendawo zihlupheka kakhulu ngalesi simo futhi akulula ukuthi sizikhombise ngaphakathi kwesixuku sezitolo ezithengisa izimpahla eziyingozi ezivela kwamanye amazwe.
Izitolo ngokuvamile zivula cishe i-10am futhi zihlala zivulekile okungenani kuze kube yi-7pm, kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi, kuya ngokusondele ekuqoqeleni kwabavakashi. Ezinye izitolo (ikakhulukazi ezindaweni ezingaphandle-kwe-the-way) zingavala kusukela ntambama ziye kwi-2pm.
Abafisa ukuthola imali engabizi kakhulu bangayithola ezitolo eziphansi ezisezingeni eliphansi kanye namakhefu aphakathi emakethe asatshalaliswa lapha nalaphaya kulo lonke idolobha. Emakethe yeRialto, ngokwesibonelo, ungathola ama-T-shirts ashibhile kanye ne-toy gondolas yepulasitiki. Iningi lezitolo zaseVenice, noma kunjalo, zisebenza ngemikhiqizo yezingcweti zasendaweni, imfashini yamaNtaliyane enamagama amakhulu nakho konke “okucebile.”
Qaphela lapho uthenga imikhiqizo yokunethezeka eyinqaba evela kubantu esakaza izinto zabo emgudwini wamapayipi (ikakhulukazi izikhwama, amasileli nokunye okunjalo). Ngaphandle kokulimaza imboni, izinto ezisezingeni eliphansi zingathathwa kumasiko futhi ungakhokhiswa inhlawulo.
Uma ufika eVenice ucabanga ukuthi ngeke ukwazi ukwenza okuncane kokuklama abaklami, cabanga futhi! Njengasemadolobheni amakhulu amakhulu ase-Italy, uthola amagama amakhulu emikhiqizo yefashini lapha. Ngokuthenga kwelebula yezingubo, indawo enhle kunazo zonke ukuthi uzungeze iPiazza San Marco, lapho ungathola khona iVersace, iMaxMara, iGucci, i-Armani, iLouis Vuitton, iPrada (namanye amaningi) amakhulu.
Okufanele ukudliwe - isiphuzo eVenice
Ngenkathi ukwamukelwa kwangaphandle kuvame ukuthi kube kuhle, ngaphakathi endlini kuvame ukuba mpofu kakhulu ukuze kungenzeki, ngenxa yezindonga ezinkulu nezindishi eziwumngcingo. Uzoncika kakhulu kwi-Wi-Fi ngenkathi ungaphakathi endlini, ikakhulukazi ngokusebenzisa i-inthanethi. Uvame ukubona abantu bendawo bephuma ngaphandle ukuze bakwazi ukufona.
IVenice inamakhofi amaningi e-inthanethi, kodwa ayabiza kakhulu kunaseYurophu yonke.
Kunokubukeka kahle yonke ibha, indawo yokudlela, ihhotela, i-B & B, njll. Vele ubuze. Yazi ukuthi ukwamukelwa kwasendlini ngaphakathi kuvame ukumpofu (ngenxa yezindonga eziwugqinsi) ne-Wi-Fi kuzoba inketho kuphela.
IVenice iyisikhumbuzo sasendulo futhi ayivumelani kalula nezidingo zesimanje.
Izindawo eziningi ezingaphandle kwezindawo ezivakashelwa kakhulu izivakashi (ezizungeze isikwele sikaSan Marc) azixhasi noma yiluphi uhlobo losizo lokuhamba, kungaba ngabahamba ngezinyawo, izihlalo ezinamasondo, izihambi noma izikebhe.
Noma yimuphi umuntu onenkinga yokuhamba uzodinga usizo oluqinile ukuxoxa ngezinto ezingalingani nezinyathelo zamabhuloho amaningi, iminyango emincane nezindawo zokudlela ezixinene.
Amanye amabhuloho eduze komgwaqo wamanzi eduze kwesikwele seSan Marc noma iZattere anemigwaqo efakiwe (okungenani ngezikhathi zezivakashi eziphakeme kakhulu), ngakho-ke uzokwazi ukufika lapho kufika khona isikebhe. Kodwa ukuhamba ngezindlela eziphakanyisiwe phakathi kwe -ustom alta kuzoba seduze kokusebenziseka. Kubalulekile ukubuza kusengaphambili futhi uhlele izindlela zakho zansuku zonke.
Izinsizakalo zeVaporetto zitholakala kakhulu kuzinsiza ezinamasondo (ezinezihlalo ezikhethekile nendawo), noma kungaba ngumzamo wokungena ezikebheni ezincane (njenge-4.x noma i-5.x imigqa).
Noma kunjalo, lindela ukuthi ama-engela angamakhanda ahluke ngokujulile futhi, futhi, isinyathelo esikebheni eshukumisayo.
Eduze kwechibi laseVenetian kunezinye iziqhingi ezincanyana, ebezilahliwe kepha zikufanele ukuvakashelwa. Kukhona neLido, okuyisiqhingi eside esincanyana esinezakhiwo zesimanje, ibamba ihostela yentsha nehhotela.
IBurano iyisiqhingi esincane esihle esidume ngezindlu zayo ezinemibala nokukhiqizwa kwendwangu.
IMestre - Idolobhana elisenkabeni yezwe.
IMurano - idolobha lesiqhingi, lidume umhlaba wonke ngokukhiqiza ingilazi.
ILido iyisiqhingi sokuthula, isifunda sasolwandle imizuzu nje ye-10 ngesikebhe esivela eSan Marco, nalapho kubanjelwa khona umkhosi wama-movie waseVenice.
ISan Lazzaro iyisiqhingi esiseduze esinezindlovukazi zase-Armenia futhi iqoqo lobuciko elihlaba umxhwele, ezinye izingcezu zezinga lomhlaba.
I-Torcello - isiqhingi esincane esacishe saba ihlane, sicebile ngobuciko nomlando
IVicenza - Idolobha lase-Andrea Palladio nezakhiwo zakwaNeoclassic, idolobha elidala elihle
I-Padova (Padua) - I-40km entshonalanga yeVenice, umsebenzi wobuciko weGiotto's Renaissance, ikhathalogu laseSanta Anthony, iScrovegni Chapel, insimu yokuqala yezitshalo emhlabeni, kanye neyunivesithi yakudala yesibini emhlabeni.
ILake Garda luhambo losuku olulula ngesitimela; liyichibi elikhulu kunawo wonke e-Italy futhi lihle ngokubabazekayo.
I-Po Delta - Indawo enokuthula nenhle ngokubabazekayo eningizimu-ntshonalanga yeVenice ngemizila yebhayisekili.
IRiviera del Brenta - Amaviza asePalladian Villas azungeze iBrenta River, nje imizuzu engu-20 ukusuka eVenice ngemoto, ayale ukuhamba okulula kwebhiking ngesitolo sendawo sokuqasha ibhayisekili. Ungavakashela ne-Riviera del Brenta ebukekayo nezindawo zayo ezinhle kakhulu ngesikebhe. IBurchiello kwakuyisikebhe sakudala esasisetshenziswa imindeni yase-Venetian engabamelwane ukuba ifinyelele ezigodini zabo ngasemfuleni iBrenta.
I-Eraclea - Imvamisa ye-pinewood yayo neLaguna del Mort, imizuzu nje ye-55 ukusuka eVenice ngemoto noma ngesikebhe.
UJesolo - UJesolo ungenye yamabhishi abaluleke kakhulu kuwo Italy, imizuzu eyi-45 ukusuka eVenice ngemoto noma ngesikebhe (isikebhe esisuka eTreporti siya eVenice).
UTreviso - isigamu sehora ngesitimela sisuka eVenice, yidolobha elihle lapho unganambitha khona i-Prosecco iwayini (ekhiqizwa emagqumeni nxazonke) neRadicchio Tardivo.
UCortina d'Ampezzo - Idolobha elithandekayo le-alpine, indawo yemidlalo yama-Olimpiki Wasebusika i1956. Izindawo ezinhle zentaba zingabiza kakhulu. Amahora ambalwa okugibela izimoto ukuya enyakatho yeVenice, amahora angaphezu kwesithathu ngesitimela nangebhasi.